Hetsiky ny polisin’ny Sag…: jiolahy telo nahatrarana gony feno entan-dakozia - ewa.mg
News - Hetsiky ny polisin’ny Sag…: jiolahy telo nahatrarana gony feno entan-dakozia
Noraisim-potsiny! Manamafy ny
hetsika efa fanaony ny polisy miasa ao amin’ny Sag Anosy amin’ny
fisafoana ireo faritra mena amin’ny tsy fandriampahalemana, toy ny
eny Anosibe sy eny Tsarasaotra. Afakomaly tokony ho tamin’ny 3 ora
maraina teo amin’ny faritr’i Paraky Tsarasaotra, nahatsikaritra
telo lahy ny polisy. Somary nampiahiahy anefa ny fihetsik’izy ireo
niaraka amin’ny gony be ka niroso amin’ny fisavana azy ireo ny
polisy. Nandritra izany no nahitan’ny polisy “barre à pince”,
varavarana aliminioma roa, baramina ary fitaovana fampiasa
an-dakozia, famantaranandro fametaka amin’ny rindrina, natao tanaty
gony avokoa ireto entana halatra ireto. Nentina nanaovana
fanadihadiana avy hatrany ry zalahy ka talin’izany ny nilazan’izy
ireo fa entana vao avy nangalarina sy varavarana tamina trano iray
tsy lavitra ity novakin-dry zalahy ity ilay varavarana aliminioma
io. Niaiky ny heloka vitany izy ireo nandritra ny famotorana
nataon’ny polisy ary efa ela ny nanaovany ity asa ratsy ity.
L’article Hetsiky ny polisin’ny Sag…: jiolahy telo nahatrarana gony feno entan-dakozia a été récupéré chez Newsmada.
Varotra ivelany: manantombo hatrany ny fanafarana entana
Tsy maintsy miantehItra amin’ny fanafarana entana ny toekarena eto Madagasikara. Manantombo ny vola mivoaka amin’ny fanafarana entana raha ampitahana ny miditra avy amin’ny fanondranana.Azo itarafana ny toekaren’ny firenena iray ny varotra ifanakalozany any ivelany, eo amin’ny fanondranana sy fanafarana entana. Marefo ny toekarena raha mbola manantombo hatrany ny fanafarana entana, toy ny eto Madagasikara. Tsy maintsy hafarana, laharana voalohany, ny solika (15,2%). Tsy tokony hohafarana nefa hafarana ny vary (6%). Nanomboka tamin’ny taona 80 ka hatramin’izao ny fanafarana vary. Tao anatin’ny 40 taona, tsy nisy politika momba ny fambolena matotra nahavitan-tena ara-tsakafo. Laharana fahatelo, fanafarana fiara.Ireo telo voalohany ireo, miampy fanafody sy kojakoja samihafa, namoahana vola 3,9 miliara dolara tamin’ny taona 2019, ka ny betsaka indrindra nafarana tany Sina, Emirats Arabes Unis, Inde, Afrika Atsimo, Frantsa. Ny aondrana betsaka avy eto Madagasikara indray, ny lavanila, nikela sy kobalta trandrahin’ny orinasa Ambatovy, akanjo vokarin’ireo orinasa afakaba. Ireo rehetra ireo, miampy vokatra an-dranomasina sy ny hafa, raha ny tarehimarika ofisialy, nahazoana 2,7 miliara dolara tamin’ny 2019. Tsy fantatra fisy isan-jato ny vola tena niditra eto an-tanindrazana ?Mila jerena ny fanatsarana ny voly varyManova zavatra betsaka ny Coronavirus, amin’ireo firenena ifandraisan’i Madagasikara akaiky eo amin’ny lafiny varotra. Tsy maintsy hisondro-bidy, hoy ireo mpanadihady ny toekarena eran-tany ny solika, toy izany koa ny vary. Tsy afa-miala amin’ireo i Madagasikara, ny fiara sy ny vokatra hafa afaka milefitra. Noho izany, mila jerena dieny izao ny politika lavitra ezaka fanatsarana ny voly vary. Politika momba ny fambolena amin’ny fanatsarana ny fotodrafitrasa, toy ny lalana, ny tohodrano sy ny lakandrano.Misy ireo fepetra amin’ny fanafarana karazana entana sasany, fa amin’ny ankapobeny, malalaka ny fampidirana izany eto Madagasikara. Tokony hahitsy ny lalàna aorian’izao valanaretina izao, sahala ny efa ataon’ny firenena maro. Nanisy teny ihany ny ao amin’ny Vondron’ny orinasa eto Madagasikara (Gem) ny amin’ny tokony hamerana ny entana hampidirina eto an-toerana. R.MathieuL’article Varotra ivelany: manantombo hatrany ny fanafarana entana a été récupéré chez Newsmada.
Covid-19: 60 ny tranga vaovao eto Antananarivo Renivohitra
Efa midina latsaky ny 200, tao anatin’ny andro maromaro misesy, ny isan’ny tranga vaovao voatily amin’ny Covid-19. Mitohy amin’ny zokiolona rahateo ny fanaovam-baksiny an-tsitrapo anatin’ny “vaccinodrome” valo manerana ny Nosy. Telo ny olona namoy ny ainy vokatry ny valanaretina Covid-19, araka ny antontanisa ny 17 mey lasa teo ka nivoaka omaly. Roa amin’ireo lavo ny teto Analamanga ary iray nytany Atsimo Andrefana. 573 ny isan’ny nanaovana fitiliana ka nahitana tranga vaovao 122. Teto Analamanga ny 90 amin’ireo ary Antananarivo Renivohitra no manana isa ambony indrindra 60, nisy 14 tao Atsimondrano, fito ny tao Avaradrano, valo ny tao Ambohidratrimo ary tokana ny tao Manjakandriana. Nahatratra 221 ireo sitrana. Manaraka fitsaboana ny marary 1 380 ka anatin’ny tranga misy fahasarotana ny 245. Nanomboka ny 23 marsa taona 2020 ka hatramin’ny 17 mey 2021, olona 40 326 ny voatily fa mitondra ny tsimokaretina teto amintsika, 38 172 ny sitrana ary 774 ireo maty manome ny taha 1,93%. Fitiliana 197 253 no vita hatreto.2 084 ny fatra vaksiny natsindronaHo an’ny fanohizana ny fanaovam-baksiny, nanomboka nandray ireo zokiolona nisoratra anarana ny toerana fanaovam-baksiny eny amin’ny HJRA ny fiandohan’ny herinandro teo. Ho an’ny olona feno 60 taona no ho miakatra na koa manana aretina mitaiza ny vaksiny andiany voalohany. Misy toerana valo tahaka ny eny amin’ny HJRA miparitaka amin’ny faritra valo manerana ny Nosy. Hatramin’ny omaly, 4 339 ny mpiasan’ny fahasalamana nisoratra anarana handray ny fatra voalohany amin’ny vaksiny, 1760 no efa nahavita izany ary mbola mitohy ny fandraisana anarana ireo mbola vonona. Ho an’ny mpitandro filaminana kosa, 324 amin’ny 912 nisoratra anarana ny nahazo ny vaksiny, araka ny fanazavan’ny minisiteran’ny Fahasalamana.Nangonin’i Vonjy L’article Covid-19: 60 ny tranga vaovao eto Antananarivo Renivohitra a été récupéré chez Newsmada.
MIHAMY MADA FASHION 2021: Styliste 23 notolorana mari-boninahitry ny kanto, ny soratra ary ny kolontsaina
Niavaka ny lanonana famaranana. Fahombiazana tanteraka ny hetsika Mihamy Mada Fashion andiany faharoa nokarakarain’ny Ministeran’ny serasera sy ny kolontsaina (MSK) ny 12 ka hatramin’ny 14 febroary 2021 teny amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Nampiavaka ny andro fahatelo ny fahamaroan’ireo mpitsidika ny trano heva. Teo ihany koa ny filatroana nampisehoana ireo zava-bitan’ireo mpamorana ireo haingo isan-karazany, toy ny tao-volo, akanjo… Tsiahivina fa mpisehatra amin’ny haingo, bika aman’endrika 50 sy « styliste » 39 no nampiranty ireo asa tanany nandritra ity hetsika ity. Ankoatra izany dia mipetraka ho tantara ho sehatry ny famoronana lamaody ny fanolorana mari-boninahitry ny kanto, ny soratra ary kolontsaina ho an’ireo « styliste » 23 nandritra ny lanonana famaranana ny Mihamy Mada Fashion 2021. Dimy (05) mianadahy tamin’izy nahazo mari-boninahitra « commandeur », fito (07) « officier » ary 11 « chevalier ». Nohamafisin’ny Ministry serasera sy ny kolontsaina, Lalatiana Andriatongarivo Rakotondrazafy fa hetsika natao hanampiana tosika ireo mpamorona Malagasy sy ireo mpisehatra rehetra tsy ankanavaka amin’ny tontolon’ny lamaody ity hetsika ity. »Vonona hatrany ny ministera amin’ny fanohanana azy ireo » hoy izy. Marihina fa ankoatra ny filatroana dia nanafana ny lanonana famaranana ny 14 febroary 2021 ny mpanakanto kalaza toa an’i Naël, Mr Sayda ary ny tarika Mage 4. Nirina R. Cet article MIHAMY MADA FASHION 2021: Styliste 23 notolorana mari-boninahitry ny kanto, ny soratra ary ny kolontsaina est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article MIHAMY MADA FASHION 2021: Styliste 23 notolorana mari-boninahitry ny kanto, ny soratra ary ny kolontsaina a été récupéré chez Délire Madagascar.
Mahajanga : Tovovavy iray maty tototry ny tany
Nipotsaka mihitsy atidohany. Vato be iray no voalaza fa nifatratra tany amin’ity tovovavy iray manodidina ny 201 taona, maty tototry ny tany, tany Mangarivotra Mahajanga, ny maraimben’ny alatsinainy lasa teo. Naharitra ora iray mahery ny fikarohana ny razana vokatry ny fianjerana tamboho iray. Tamboho iray manamorona ny trano fonenana mpianaka tany akaikin’ny “bloc opératoire” no nihotsaka noho ny rotsak’orana, ka nahatonga izao fahafatesana izao. Araka ny loharanom-baovao avy an-toerana, olona roa ihany izy ireo no tao anatin’ity trano voakasika, resin-tory tanteraka ity farany, tamin’ny fotoana nitrangan’ny loza. Raha ny fanazavana azo tamin’izany moa dia tao anatin’ny ora vitsy monja no nisehoan’ity zava-doza ity, ka tsy nahavita namoha ny zanany intsony ilay renim-pianakaviana, izay efa tsy natory mihitsy raha nahare ny fitsokan’ny rivotra sy ny ora-nikija. Efa tonga nijery ny zava-nitranga tany an-toerana nisy ireo niharam-boina ny sampana mpamonjy voina. Vantany vao nisy io tranga io kosa dia efa nandray fepetra ny tompon’andraikitra tamin’ny fanalana ireo olona mipetraka eo amin’ny manodidina. Azo lazaina fa efa tara izao fandraisana andraikitra izao hoy ny nambaran’ny mponina eny amin’ny manodidina, satria efa nanaitra ny tompon’andraikitra matetika izy ireo amin’ity rindrin-tany efa ratsy ity, saingy izao nahitan-doza izao. Valérie R. L’article Mahajanga : Tovovavy iray maty tototry ny tany est apparu en premier sur .L’article Mahajanga : Tovovavy iray maty tototry ny tany a été récupéré chez Triatra.
Niampy iray indray ny evekan’i Madagasikara. Nanafatrafatra ny mpino sy ny vahoaka ny kardinaly Tsarahazana Desiré, tetsy Mahamasina, omaly. Nitodika amin’ny eveka mpanampy vaovao, ny Mgr Andriantsoavina Jean Pascal ny tenany nefa koa nanipy teny ho an’ny vahoaka sy ny mpitondra. “Aoka ho mendrika amin’ny andraikitra nomena sy hanana finoana… Misongadina amin’ny hafatr’i Jesoa ny fanompoana. Tokony hiaina izany isika. Fanompoana tsy izy no ataontsika ka anisan’ny mahatonga ny fahantrana sy ny fahasahiranana izany. Tsy mahazaka fahoriana ny hafa… Tsy mifanompo… Zava-poana raha tsy manompo an’Andriamanitra sy ny namana isika ary arahina vavaka izany, araka ny hiram-pirenentsika…”, hoy izy.Mendrika amin’ny fanendrena… Nanontany tamin’ny fampianarany ny kardinaly Tsarahazana ny amin’ny maha mendrika na tsia ny fanendrena ny tena. Amin’ny andraikitra rehetra io. Niaiky ny tenany fa misy ihany ny ahiahy, saingy misava izany rehefa eo ny finoana. Notsiahiviny rahateo ny teny fanevan’ny eveka vaovao eto amin’ny arsidiosezin’Antananarivo : “Tompo o ! ianao no itokiko”.Nialoha izany ny namakian’ny solontenan’ny Vatikana eto amintsika, ny Mgr Paolo Rocco G. ny taratasy amin’ny teny latinina ny fanendrena nataon’ny papa François ny eveka mpanampy, Andriantsoavina ny 8 jolay teo. Niroso tamin’ny fametrahan-tanana sy fanamasinana azy, avy eo, ny eveka telo isany : Tsarahazana Desiré sy Razanakolona Odon ary Ranaivomanana Phillipe. Natao ny fanosorana menaka sy fametrahana ny bokin’ny evanjely teo an-dohany ary koa ny fampidirana ny peratra. Nitohy tamin’ny fanomezana ny satroka izany ary koa nampiambozona azy ny lakroa.Nampihaonin’ny fanamasinana ny filoha amperinasa sy ny teo alohaNarahin’ny fanomezana tehina, mariky ny maha mpiandry ondry. Nentina fiara nihodidina ny kianjan’i Mahamasina avy eo ny eveka mpanampy vaovao, notronin’ny Mgr Razanakolona Odona, ho mpiara-miasa aminy eto amin’ny diosezin’Antananarivo.Niatrika izany ny filoha Rajoelina sy ny eo anivon’ny fitondram-panjakana ary koa ny ben’ny Tanànan’Antananarivo, Ravalomanana Lalao mivady. Samy nankasitrahana avokoa izy ireo tamin’ny lahateny nifandimbiasana noho ny fanohanana sy fanampiana tamin’ny hetsika natao, omaly. Fa eo koa ny handraisana ny papa François, afaka iray volana latsaka. Mbola hifamotoana eny Amboara, Ambohidratrimo indray ny mpino katolika, ny 25 aogositra izao amin’ny fanamasinana pretra sy diakra. Synèse R. / Tiana Teraka ny 24 marsa 1969, izany hoe 50 taona ny eveka mpanampy Andriantsoavina Jean Pascal. Nohamasinina ho pretra, ny aogositra 2000. Ray mpiahy ny tanora sy ny FET ny tenany. Nandranto fianarana tany ampita avy eo ary nahazo ny mari-pahaizana ambony momba ny soratra Masina. Nampianatra ny fandalinana ny filozofia tao amin’ny seminera Antsirabe . 11 taona ny naha rektoran’ny fanofanana pretra azy tany Vakinankaratra. Nitondra ny distrikan’i Imerinafovoany izy mialoha izao fanendrena izao. L’article Hafatry ny kardinaly – Fanamasinana eveka: “Aoka ho mendrika amin’ny andraikitra nomena…” a été récupéré chez Newsmada.
Polisy vavy tetsy Isotry: voasambotra ny mpangarom-paosy gagilahy
Taorian’ny fahatrarana ny mpanendaka teny 67 ha andro vitsy lasa izay, tra-tehaky ny polisy avy amin’ny Brigade feminine de proximité, omaly, ny lehilahy iray ikoizana amin’ny fangaronam-paosy tetsy amin’ny faritr’Isotry…Teo am-panatontosana ny asa ratsiny ity mpangarom-paosy gagilahy ity no nifanenjehan’ny polisy vavy iray niasa tetsy Isotry, omaly. Vehivavy iray teratany vahiny saika haka fiara karetsaka teo amin’ny manodidina ny narahin’io lehilahy io. Naroniny avy hatrany ny paosin’ilay vazaha ary nirifatra nitsoaka izy. Hitan’ilay niharan-doza ny fihetsiny ka nitabataba sy niantso vonjy ny tenany. Tsikaritry ny polisy vavy iray avy amin’ny Brigade feminine de proximité izany ka nanenjika ilay olon-dratsy izy. Tsy nampoizin’ilay tontakely hahatratra azy io vehivavy polisy io kinanjo voasambotra tsy lavitra ny nisehoan’ny fandrobana io mpanendaka io. Sarona teny aminy, noho izany, ny finday avy nangalarina an’ilay vazaha. Marihina fa notanan’ny polisy io mpangarom-paosy io raha toa ka naverina amin’ny tompony ny entana halatra.Mandrahona ny manodidina azy…Efa fanaon’io tovolahy voasambotra omaly io ny mangarom-paosy sy manendaka fananan’ny mpiantsena eny amin’ny manodidina iny toerana iny. “Mody mitondra selofanina mainty foana izy ka maka tahaka ireny mpiantsena ireny”, hoy ny mponina. Tsy afa-manoatra ny olona mahita ny asa ratsin’io lehilahy io isan’andro noho ny tahotr’izy ireo.Tsiferana RandriatianaL’article Polisy vavy tetsy Isotry: voasambotra ny mpangarom-paosy gagilahy a été récupéré chez Newsmada.
Fondation Viseo-Androy: notokanana ny efitranon-tsekoly vaovao
Vita soa aman-tsara ary notokanana ny herinandro teo ny efitranon-tsekoly vaovao miisa roa ao amin’ny EPP ao amin’ny faritra Androy. Nidina tany an-toerana ny Fondation Viseo niaraka tamin’ny Association Fitia izay natrehin-dRamatoa Mialy Rajoelina, vadin’ny filoham-pirenena sy ny governoran’ny faritra Androy, Lahimaro Soja, nanatanteraka ny fanokanana izany tamin’ny fomba ofisialy.Manatanteraka ny fanambiny amin’ny tolo-tanana ho an’ireo ankizy zanaky ny fianakaviana sahirana eto Madagasikara ny Fondation Viseo ary anisan’izany ireo ankizy any amin’ny faritra Androy izay mijaly fatratra noho ny kere.Vokatry ny fiaraha-miasa amin’ny mpiara-miombon’antoka toy ny fianakaviana Tahora, Materauto, Ocean Trade ary Sodiama dia sekoly maromaro ao amin’ny distrikan’i Tsihombe no nisitraka fotodrafitrasa. Anisan’izany ny ao amin’ny EPP Ankazombalala, EPP Ankibay, EPP Marosy ary EPP Betsimeda.Tarihin’ny filohany Moustafa Hiridjee ny Fondation Viseo. Mikendry ny hanangana efitranon-tsekoly manodidina ny 100 ao anatin’ny dimy taona izy ireo. Ankoatra izany, hitondra ny anjara birikiny amin’ny fanatsarana ny sehatry ny fahasalamana indrindra ho an’ny ankizy amin’ny faritra ambanivohitra sy ireo toerana sahirana ihany koa ny Fondation Viseo ao anatin’ny asa sosialy entiny ho an’i Madagasikara.Tatiana AL’article Fondation Viseo-Androy: notokanana ny efitranon-tsekoly vaovao a été récupéré chez Newsmada.